ခြာတိတျမလေး – Page2– ရသစုံ
သောကြာ,ဆားဝယ်​ ​ငွေ​ကြေးကြွယ်​ ပြုလုပ်​ရမှာက… ​သောကြာ​နေ့တိုင်း မနက်​၆နာရီ မှ ၆နာရီ ၁၅မိနစ်​အတွင်း ။ ​နေ့လည်​ ၁နာရီမှ ၁နာရီ ၁၅မိနစ်​အတွင်း။ ည ၈နာရီမှ ၈နာရီ ၁၅ မိနစ်​အတွင်း။ ၄င်း ၃ကြိမ်​မှ မိမိအဆင်​​ပြေသည့်​ အချိန်​တွင်​ အိမ်​သုံးဆား တစ်​ထုတ်​ ဝယ်​ယူရမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ အချိန်​သည်​ ၁၅မိနစ်​
စိတ်ထားဖြူစင်ပြီး ၀မ်းနည်းလွယ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာများ
စိတ်ထားဖြူစင်ပြီး ၀မ်းနည်းလွယ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာများ မိန်းကလေးတွေထဲမှာ အရမ်းကိုစိတ်ထားဖြူစင်ပြီး ခံစားလွယ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရှိပါတယ်။ တစ်ခါတလေ သူတို့ရဲ့ ဖြူစင်မှုဟာ အများအမြင်မှာ တစ်မျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ထားဖြူစင်ပြီး ခံစားလွယ်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးဟာ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်နော် (၁) လူတွေကို အရမ်းဂရုစိုက်တယ် စိတ်ခံစားချက်ပြင်းထန်ပြီး ဝမ်းနည်းလွယ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ လူအများရဲ့ အထင်အမြင်တွေကို
ယောက်ျားလေးများ ယူသင့်သော မိန်းမ (၁၀) မျိုး မိမိချစ်သူလေးအား မန်ရှင်းခေါ်ပေးလိုက်ပါ (၁). အနာရောဂါ ကင်းရှင်းပြီး အနေအထိုင်သိမ်မွေ့ သန့်ရှင်းသော မိန်းမ (၂). မိဘအား ပြုစုလုပ်ကျွေးလိုစိတ်ရှိပြီး ကိုယ့်ထက်အကြီးများအား လေးစားစွာ ဆက်ဆံတတ်ပြီး ကိုယ့်ထက် အငယ်များအား အရာရာနားလည် ထိန်းကျောင်းပေးတတ်သော မိန်းမ (၃). ပုံမှန်အားဖြင့် ယောကျာ်းဆို စိတ်မ၀င်စားတတ်..
နဲနဲလေးအအေးခံလိုက်တာနဲ့ တစ်ဆစ်ဆစ်ကိုက်ခဲနေတဲ့ ခါးနာ ဝေဒနာကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်း
နဲနဲလေးအအေးခံလိုက်တာနဲ့ တစ်ဆစ်ဆစ်ကိုက်ခဲနေတဲ့ ခါးနာ ဝေဒနာကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်း ခါးနာဝေဒနာကို ခံစားနေရပါသလား..? နဲနဲလေးအအေးခံလိုက်တာနဲ့ အရိုးအဆစ်မြစ်တွေ တစ်ဆစ်ဆစ်ကိုက်ခဲတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေပါသလား..? အခုဖော်ပြမယ့် နည်းလမ်းလေးကို သုံးကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ ဒီဝေဒနာတွေအားလုံး ယူပစ်သလို ကင်းစင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ခါးနာ၊ အရိုးအဆစ်တွေ ကိုက်တတ်လို့ ဆရာဝန်သွားပြရင် ဆရာဝန်တွေ အားလုံးက ဒီပြဿနာဟာ အနေအထိုင် ကိုယ်နေဟန်ထား မမှန်ကန်လို့ ဖြစ်တာ၊
သင့်ရဲ့ကားမှ အင်ဂျင်ပလတ်လဲဖို့ လိုနေပြီဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ အချက်သုံးချက်
သင့်ရဲ့ကားမှ အင်ဂျင်ပလတ်လဲဖို့ လိုနေပြီဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ အချက်သုံးချက် သင့်ရဲ့ကားမှာ အင်ဂျင်ပလတ် (spark plug) လဲဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာကို ဒီအချက်သုံးချက်က ညွှန်ပြပါတယ် (၁) စက်နှိုးပြီး ကားရပ်ထားတဲ့အချိန် (Idle အခြေအနေမှာ)စက်အရမ်းတုန်နေမယ်။ RPM က မငြိမ်ဘူးဖြစ်နေမယ်။ (၂) ကုန်အတက်တွေ၊ ဝန်များတဲ့အချိန်တွေ၊ အမြန်မောင်းတဲ့အချိန်တွေမှာ ကားကတွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်ဖြစ်မယ်။ အဲဒါက မီးမကူးတာ (misfire)
စံပယ်ပင်လေးတွေ အပွင့်များများပွင့်အောင် ဒီလိုစိုက်ပါ
စံပယ်ပင်လေးတွေ အပွင့်များများပွင့်အောင် ဒီလိုစိုက်ပါ ၁။ စံပယ်ပင်လေးတွေစိုက်တော့မယ်ဆိုရင် အိုးနဲ့စိုက်မှာလား၊ မြေမှာ ချပြီးစိုက်မှာလား… ရွေးပါ။ အိုးနဲ့စိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း အိုးက ရေမဝပ်အောင် အောက်ခြေမှာ အပေါက်လေးတွေပါတဲ့အိုးနဲ့ စိုက်ပါ။ မြေမှာ စိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ရေမဝပ်နိုင်တဲ့နေရာမှာ စိုက်ပါ။ ၂။ စံပယ်ပင်လေးတွေဟာ နေရောင်ကြိုက်ပါတယ်။ အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာမှာ စိုက်ပါ။ ၃။ စံပယ်ပင်လေးတွေကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ရေလောင်းပါ။ ရေလောင်းတဲ့အခါမှာ
အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ကြီးမားတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကို ခံစားခဲ့ရသူတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာ (၁၀)မျိုး
အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ကြီးမားတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကို ခံစားခဲ့ရသူတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာ (၁၀)မျိုး လူတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုအမူ၊ အကျင့်စရိုက်နဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေဟာ ငယ်ဘဝဖြတ်သန်းလာရပုံနဲ့ အများကြီးသက်ဆိုင်နေပါတယ်။ မိသားစုမပြေလည်တဲ့သူတွေ၊ မိဘမဲ့တွေ (မိစုံဖစုံမနေခဲ့ရသူတွေ)၊ ဆင်းရဲချို့တဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ မိသားစုဝင်တွေကြားမှာ ကြီးပြင်းလာရသူတွေမှာ အများဆုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ငယ်ဘဝမှာ ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာရှိတဲ့သူတွေမှန်း သိနိုင်မယ့် လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီလိုလူတွေရှိခဲ့ရင် စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး
စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အစားတွေစားပီး ဟာသတွေပြောပါ။အိမ်မှာနေရင် ကိုယ်ဝါသနာပါတာစိတ်နှစ်ပီး သေချာလုပ်ပါ။ လူတွေက ကိုယ်ဝါသနာပါတာ လုပ်နေရရင် စိတ်ချမ်းသာတတ်ကြတယ်။ သီချင်းမြူးမြူးလေးတွေ နားထောင်ပီး စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ ဘာအပူအပင္မွ မရွိသလို ပျော်ပျော်ပါးပါး ဖြတ်သန်းပစ်လိုက်ပါ။ အလှတွေပြင်ပါ အင်္ကျီဒီဇိုင်းလန်းလေးဝတ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ဘဝအတွက် သုတရတစာတွေ အကျိုးရှိစေမဲ့စာအုပ်တွေကို တစိုက်မက်မက်ဖတ်ပီး ကြိုးစားဖို့လုပ်ပါ။ မရောက်ဖူးတဲ့ခရီးတစ်ခုကို
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မစခင် မဖြစ်မနေ ဒါတွေသိထားပါ
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မစခင် မဖြစ်မနေ ဒါတွေသိထားပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအစပြုတော့မယ်ဆိုရင်တော့ လခစားဝန်ထမ်းဘဝလိုခေါင်းအေးအေးနေလို့မရတော့ပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့အရာတွေ သိထားရမယ့်အရာတွေအများအပြားပါပဲ။ တကယ်လို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ် ဘာတွေလိုအပ်မလဲစဉ်းစားမရဖြစ်နေရင် မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အရာတွေသိထားရအောင် အောက်ပါအချက်တွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ (၁) ငွေနောက်ကိုအရမ်းမလိုက်ပါနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်တာပဲပိုက်ဆံလိုချင်လို့ဆိုတာမှန်ပါတယ် ဒါပေမယ့်လဲငွေနောက်ပဲအရမ်းလိုက်လွန်းရင် အမှားတွေပါတတ်ပါတယ်။ ရေရှည်အတွက်လဲကြည့်ဖို့လိုသလို ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အရာ ကိုယ်စိတ်အားထက်သန်တဲ့အရာလဲ ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ (၂) မိသားစုကိုဝင်မစွက်ဖက်ပါစေနဲ့ စီးပွားရေးတစ်ခုကိုအစပြုတဲ့အခါ မိဘမောင်နှမတွေနဲ့အတူတူလုပ်ကိုင်တာဟာ ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများစေ ပါတယ်။ လူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးဟာ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ရွတ်ဆိုရသော သားကောင်းသမီးမြတ် ရရှိစေသော ဂါထာတော်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ရွတ်ဆိုရသော သားကောင်းသမီးမြတ် ရရှိစေသော ဂါထာတော် သားကောင်းသားမြတ် ရစေသော ဂါထာ (ပဋိသန္ဓေတည်နေစဉ် ရွတ်ဆိုရန်) ယော မေ အယံ ဘန္တေ ကု စ္ဆိတော ကုမာရကော ဝါ ကုမာရိကာ ဝါ၊သော ဘဂဝန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆတိ ဓမ္မဉ္စ ဘိက္ခု သံဃဉ္စ၊ ဥပါသကံ တံ